गायक प्रकाश सपूतलाई बाबुराम भट्टराईको साथ भन्छन् “गीतले अपूर्ण क्रान्तिको पीडा दर्शाएकाे छ , किन धम्काउने ?” - ABNews Nepal
Mar 13, 2022 abnewsnepal, abnewsnepal.com, ajako khabar, ajako khabar nepal, Bhupendra Karal, chitwan news, katathmandu news, latest ramailo samachar, taja khabar nepal
काठमाडौं । (जसपा)का संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले गायक प्रकाश सपुतको नयाँ गीतमा आपत्ति जनाउनु पर्ने कुरा नभएको बताएका छन् ।
माओवादी जनयुद्धका पीडित कार्यकर्ताका पीडाको विषयवस्तु समावेश गरेर सृजना गरिएको प्रकाश सपुतको ‘पीर’ म्युजिक भिडियो विवादित बनेपछि अध्यक्ष भट्टराईले पनि गीतप्रति टिप्पणी गरेका हुन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले गीतले जनयुद्धको बिरोध नगरेको बरु अपूर्ण क्रान्तिको पीडा दर्शाएको उल्लेख गरेका छन् ।
‘गीतले जनयुद्धको विरोध गरेको छैन। अपूर्ण क्रान्तिका पीडा दर्शाएको छ,’ भट्टराईले लेखेका छन् । उनले माओवादी नेताहरुलाई गीतको भावबाट क्रान्तिलाई नयॉ ढंगले अगाडि बढाउने पो हो की भनेर सोच्नुपर्ने बेला भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
भट्टराईले गीतका सर्जकलाई सपूतलाई किन धम्क्याउने ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उक्त गीतको बिरोध गर्दै माओवादी नेताहरुले युट्युवबाट हटाउन भनिरहेका छन् ।
लोकप्रिय गायक प्रकाश सपुतको ‘पिर’ शिर्षकको गीतको म्युजिक भिडियो युट्युबमा शुक्रबार रिलिज भएपछी चौतर्फी बिरोध भएको छ । रिलिज भएको ७२ घन्टा मै ११ लाख बढीले हेरीसकेका छन् र ट्रेण्डिङ्गमा पनि परेको छ । माओवादी द्ध’न्दका बेला बन्दुक बोकेर परिवर्तन र गणतन्रका लागी ल’डेका लडाकुहरुको कथा समेटिएको उक्त म्युजिक भिडियोमा एक लडाकु महिलाले जीवन धान्नका लागी यौ ‘न पेसा अपनाएको चित्रांकन गरिएको छ । भिडियोमा राखिएको दृश्य प्रति असहमति जनाउदै बिरोध भई रहेको छ ।
बिशेषगरी माओवादी पार्टीका बिद्यार्थी नेता कलाकारले उक्त भिडियोको बिरोध गर्दै सपुतलाई हटाउन चेतावनी दिएका छन् । केहि बिरोध र समर्थन बीच सामाजिक संजाल फेसबुक पनि तातेको छ । यसैक्रममा पुर्वप्रधानमन्त्री एवं जसपाका नेता तथा जनयु’द्धका तत्कालिन कमाण्डर बाबुराम भट्टराईले सपुतको समर्थनमा आफ्नो अभिब्यक्ती दिएका छन् । उनले भनेकाछन् – “म पनि यु’द्धको एक अगुवा हुनुको नाताले प्रकाश सपुतको गीतमा टिप्पणी गर्ने अधिकार राख्दछु । र भन्छु त्यसमा आपत्ति मान्नु पर्ने कुरै छैन ।
एकाएक भाईरल भएको उनको युट्युबमा ‘पिर’ शिर्षकको म्युजिक भिडियोमा आएको सकारात्मक टिप्पणी र सामाजिक संजालमा आएको नकारात्मक टिप्पणीले उनलाई कार्यक्रम अवधीभर तनावमा राख्यो । यती मात्र होइन उनले कार्यक्रम संचालनका क्रममा प्रमुख अतिथीका रुपमा आएका सम्माननीय उपराष्ट्रपतिको पद र नाम समेत बिर्सिए । उनको यस भिडियोबाट आएको नकारात्मक टिप्पणीलाई कसरी जवाफ दिन्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
गीतले जनयु’द्ध को बिरोध गरेकै छैन । अपूर्ण क्रान्तिका पिडा दर्शाएको छ । त्यसनिम्ती क्रान्तिलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने पो हो कि ? गीतका सर्जकलाई किन ध’म्क्याउने ? यता सामाजिक संजालमा प्रतिकृया आई रहंदा शनिबार नाचघरमा राष्ट्रिय लोकदोहरी प्रतिष्ठान उपत्यका समन्वयन समितिले आयोजना गरेको राष्ट्रिय लोकदोहरी अवार्ड – २०७